ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တောနက်အတွင်းမှ လေယာဉ်ပျက်တစ်စင်း ဒေသခံ ရဝမ်လူမျိုးများ တွေ့ရှိဟ? - Yangon Media Group
ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တောနက်အတွင်းမှ လေယာဉ်ပျက်တစ်စင်း ဒေသခံ ရဝမ်လူမျိုးများ တွေ့ရှိဟ?
ရန်ကုန်၊ ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ တောတောင်အတွင်းတစ်နေရာ၌ လေယာဉ် ပျက်တစ်စင်းကို ဒေသခံ ရဝမ်လူမျိုးများက တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ သည်။
”သတင်းတွေတော့ ကြားနေရတယ်။ ပူတာအိုဘက်က ဟိုးတောကြီးထဲမှာ တွေ့ တယ်လို့ ကြားရတာပဲ။ အန်တီလဲ နယ်မြေ ဆင်းနေတော့ ကောင်းကောင်းမသိသေးဘူး။ တွေ့တယ်လို့ပဲ ကြားနေရတယ်”ဟု ဆွမ်ပရာ ဘွမ်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်(၁)မှ ဒေါ်ဂျေထုရော် က ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ တော တောင်ထူထပ်သည့်နေရာများတွင် နေထိုင် သောဒေသခံများဖြစ်ကြသည့် ရဝမ်လူမျိုးများ မှ တောအတွင်း သစ်ဥ၊ သစ်ဖုများနှင့် ဆေး မြစ်များ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာမှ တောအတွင်း တစ်နေရာ၌ ပျက်ကျခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့် လေယာဉ်ပျက်တစ်စင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟု အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများတွင် ရေး သားထားသည့်သတင်းအား ပြန်လည်မျှဝေသူ များပြားခဲ့သည်။
”တွေ့တာကတော့ ရဝမ်လူမျိုးသုံးဦးလို့ ပြောတာပဲ။ သူတို့တွေက တောထဲမှာ သစ်ဥ သစ်ဖုရှာရင်း တွေ့တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အတိအကျတော့ မကြားရသေးဘူး။ အခုအခြေ အနေထိတော့ ဒါကို ပြန်လည်တူးဖော်ဖို့အ တွက် လုပ်နေတယ်လို့ တစ်ဆင့်ကြားရတာ ပဲ”ဟု ပူတာအိုမြို့မှ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြော သည်။
လေယာဉ်သည် သစ်ပင်ခြုံနွယ်များကြား ရောက်ရှိကာ အချို့အစိတ်အပိုင်းများသည် သစ်ပင်ခြုံနွယ်များဖြင့် ဖုံးအုပ်နေသော်လည်း ကိုယ်ထည်အချို့မှာ မပျက်စီးဘဲ ကျန်ရှိနေ သေးသည်ဟု အဆိုပါသတင်းများတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် လေယာဉ်တွေ့ ရှိသည့်နေရာများအား တည်နေရာ ရှာဖွေနိုင် ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုလည်း ဆိုထားသည်။
”ကျွန်တော်ကတော့ မကြားမိသေးဘူး ဗျ။ လွှတ်တော်ကလဲ နားထားတယ်။ လော လောဆယ် မခေါ်သေးဘူး။ ကျွန်တော် နည်း နည်းစုံစမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်”ဟု ပူတာအိုမြို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်(၁)မှ ဦးယော ဆီက ပြောသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်အား ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်အတွင်းက ပျက်ကျခဲ့သည့်လေယာဉ်ဖြစ် ကြောင်း ရေးသားပြောဆိုထားသော်လည်း သီးခြားအတည်ပြု၍ မရခဲ့ပေ။ တွေ့ရှိခဲ့သည် ဟုတင်ထားသည့် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများမှ ဓာတ်ပုံများအရ လေယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့်အတူ လူနှစ်ဦးပုံကိုလည်း တင်ထားသည်ကို တွေ့ရ သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်၏ အမြီးပိုင်းတစ် နေရာတွင် ၃၄၇၂၃၅ နှင့် ၇၂၃၅ ဆိုသည့် စာတမ်းများ ရေးထိုးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် အောက်ခြေတစ်နေရာတွင် အဖြူ ရောင်ဖြင့် ရေးသားထားသည့် ၂ဝဝ၄ ဟုလည်း ကောင်း၊ ထိုအောက်တွင် ၂-၁ ဟုလည်းကောင်း စာသားများပါရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
တောင်ကိုရီးယားလွှတ်တော်တွင် ထရန့်မိန့်ခွန်းပြော၊နျူ လက်နက်စွန့် လွှတ်ရန် မြောက်ကိုရီးယားက